China EVA / TPE Yoga Mat Factory - China Eva / TPE Yoga Mat Abavelisi, ababoneleli
EVA Flour MAT
Eva Ekhaya Mat
Ibala lokudlala leEVA
EVA / TPE Yoga Mat
Ukuthunga i-suede carpet puzzles ...
Ujije amagwebu uthunge ma ...
Igumbi lokulala labantwana pu ...
Splicing ikhaphethi lokulala ful ...
Ukuthunga Velvet Floor Mat ...
Abaqalayo be-Gamma mat abangatyibilikiyo ukujija kwendoda kunye nabasetyhini ekhaya TPE ukomelela mat kwindawo yokulala yomfundi omnye omnyama
Unxantathu usifake mat, ekukhethwa ukuba ekhuselekileyo kunye nezinto EVA nokusingqongileyo, izinto ekrwada ifakwe amagwebu kubushushu eliphezulu kwaye icinezelwe isakhiwo ezixineneyo
Ukulinganisa uyilo lobuso bolusu lolusu lomntu, ngokulungeleleneyo luhlelwe ngocwangco, ukuze umphezulu womgangatho womgangatho ugude kodwa ungatyibiliki, kwaye wenza ukuba ukubamba kube ngathi kufutshane nolusu lomntu
Kulula ukuyicoca kwaye iyakucocwa emva kokusula kube kanye, amabala amanzi, amabala obisi, okushiyekileyo iinkozo zerayisi, iziselo, iisuphu azizukuntywila, azinamatheli, zinciphisa ngokufanelekileyo ukukhula kweentsholongwane, ukucoca kunye nokonga ixesha
Ukuxinana okuphezulu, ukutyeba okuhle, kunokufunxa amandla eempembelelo kakuhle, ukukhusela amalungu emilenzeni
Ubungqina bamanzi, anti-skid, ukothuka-ubungqina kunye nokwehla kobungqina, umncedisi olungileyo ekusebenziseni ikhaya, izakhono ezahlukeneyo eziqinileyo, ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zosapho
Amadoda nabafazi be-Yoga bandise ukwandisa ukuqalisa ekhaya okungatyibilikiyo kunye nomdaniso wokungqengqa ongathandekiyo we-yoga mat mat
[Igama leMveliso]: AP-224 imibala emibini yoga mat
[Umbala weMveliso]: i-magenta emfusa, ingca eluhlaza, ipinki ngombala omsobo, umbala o-cyan oluhlaza
[Izinto zeMveliso]: Ukhuselo lokusingqongileyo TPE
[Ukucaciswa kwemveliso]: 183cm × 61cmx6mm
I-Thicken Yoga Mat EVA Material Men's and Fitness Fitness Mat Amacala amabini acocekileyo oMdaka oMdaka oMdaka
Imveliso yemethi yomgangatho yenziwa bubushushu obuphezulu obuphuphuma amagwebu, izinto ezintsha zohlobo lwe-EVA, izinto ezikhuselekileyo nezinobuhlobo bendalo, ivumba elingelilo ityhefu nelingacaphukisiyo, kwaye linokusetyenziswa kwimiboniso eyahlukeneyo, enje: kwigumbi lokulala, kwigumbi lokuhlala, Igumbi labantwana, igumbi lokulala, ibhalkhoni, igumbi leyoga, indawo yokuzivocavoca, iindawo zokuthenga, iipaki zokuzonwabisa, iivenkile, njl.
Ubume bomphezulu womgangatho wegwebu ucacile, ugcwele kwaye wahlukile. Iyomelela phantsi koxinzelelo olunzima. Yomelele kwaye yomelele. Ayikhubazekanga ixesha elide. Yisebenzisa iigears ekulula ukuzenza, ezinokuqiniswa kwaye zihlukaniswe ngokulula. Uyilo olunokukwazi ukugcinwa lusonga isithuba xa lufakwa kwaye lugcinwa
Mat mat ukomelela okuphezulu koxinano olungatyibiliki Hlala-up kwimidlalo yemidlalo emininzi
1. Nje ukuba uthathe ibhedi ye-PVC, sukuyivula, kwaye unuke umphezulu wemethi ngeempumlo. Ukuba kukho ivumba elibi, kunokwenzeka ukuba umgangatho awonelanga ngokwaneleyo.
2. Sebenzisa ubhontsi wakho kunye nomnwe wesalathiso ukucofa umethi weyoga ukuzama ukuxhathisa uxinzelelo kunye nokomelela.
3. Sula imethi ye-yoga ngesisuli ukubona ukuba kulula na ukuqhekeka okanye akukho mkhondo xa utsaliwe ngobunono.
4. Ngobunono ubutyhalele ubuso bematethi ngentende yesandla sakho ukuze ubenze bubonakale bomile.
I-Yoga mat yabasetyhini eyomeleleyo yokuzivocavoca yandiswa yaze yaqina yongqingqwa yomdaniso wokuzilolonga imithambo yokuqalisa imethi ekhaya
Iimpawu: 1. Izinto ezingangcolisiyo, ezikwaziyo ukumelana nesiliphu ngaphezu kweepvc ze-yoga mat (izinto ze-tpe azichukumisi manzi, nokuba ubile xa uziqhelanisa, ukumelana nesiliphu kusabalasele kwaye akusayi kutyibilika).
2. Inokomelela kunye nenkxaso yamandla (umqamelo ukusuka ekucinezeleni ukubuyela umva kwakhona kwifomu yesiqhelo, kuthatha imizuzwana eyi-0.1 kuphela!).
3. Izinto ezicocekileyo zokukhusela indalo esingqongileyo, izinto ezingafunekiyo zizinto ezingangcolisiyo, eziqale zatshintshelwa kwizinto ze-EVA, akusayi kubakho kunambitheka kwimveliso.
4. Phantsi kwesiseko sokucaba okufanayo, izinto zilula, ziigram ezingama-950 kuphela, kwaye kufanelekile ukwenziwa.
5. Umbala kunye nesimbo semveliso ziyilwe ngocoselelo ngumyili, kunye nefashoni kunye nobungcali bahlala kunye.
6. Imigca yokutyibilika enamacala amabini, imigca yokutyibilika yobusi ngaphambili, imigca yokulwa nesiliphu yentlanzi ngasemva, kwaye iphedi yonke igqunywe ngokuxinana ngamasuntswana amancinci.
Thicken yoga mat EVA impahla amadoda and women fitness mat Double-emacaleni umbala solid solid mat mat
Izinto zerabha kunye neplastiki ze-EVA zizinto ezintsha zeplastiki ezinobuhlobo bendalo, ezinezibonelelo zokuqiniswa okuhle, ukumelana nomothuko, ukufudumeza ubushushu, ukuxhathisa ukufuma, ukumelana neekhemikhali, njl., Kwaye ungafaki manzi. Irabha kunye neemveliso zeplastikhi ziyilelwe ukuba zilungiswe kwaye zenziwe, kwaye ukumelana kwabo nokothuka kubhetele kunezixhobo zemveli ezinjenge-polystyrene (foam), kwaye ziyahlangabezana neemfuno zokhuselo lokusingqongileyo, zibenza babe lukhetho lweemveliso ezithunyelwa ngaphandle. Xa kuthelekiswa nokupakisha okungothusayo, kunokunqunyulwa kwaye kwenziwe; ngenxa yomahluko omkhulu koxinano, inokusetyenziselwa uluhlu olubanzi lweenjongo.
I-Yoga Mat EVA yeziXhobo zeMadoda kunye nokuQiniseka kwabaFazi Mat Amacala amabini acocekileyo oMbala oMdaka oMdaka oMdaka
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, AMP Iselfowuni Umgangatho wePuzzle wePuzzle, Umgangatho weMat Puzzle, Umgangatho wePuzzle, Umgangatho wePuzzle Mat Cushion, Umgangatho wePuzzle yePuzzle, Umgangatho wePuzzle wokuzilolonga iMat, Zonke iiMveliso
I-Rd Liaowei Ilali yaseYuanzhou Idolophu iBoluo Huizhou isixeko iGuangdong China